एक मार्गदर्शन प्रसारण संग कुनै पनि कार यस्तो क्लच मास्टर सिलेंडर रूपमा संयन्त्र सुसज्जित छ। UAZ "आवारागर्दी ~" - कुनै अपवाद छ। कसरी गर्छ मास्टर सिलेंडर? के को लागि यो कार मा छ? यो सबै - यस लेखमा पछि।
यस मामला मा, हामी एक मार्गदर्शन गियरबक्सलाई विचार गर्नुहोस्। कार नै गियर मा सार्ने पालन गर्न सक्दैनौं। तदनुसार, यो इन्जिन चक्का मा स्विच बक्स विच्छेद गर्न आवश्यक छ। को संलग्नता को घर्षण प्लेट ल्याउन, त्यहाँ एक कामदार र क्लच मास्टर सिलेंडर छ। UAZ "पैट्रियट" तिनीहरूले पनि, सुसज्जित छ। स्वचालित प्रसारण संग विदेशी कार मा यस्तो कुनै तत्व हो। तसर्थ, उहाँले छोटकरीमा प्रसारण देखि इन्जिन जडान टुट्छ, र तपाईं पेडल जारी गर्दा बिस्तारै तिनीहरूलाई परिचय मगनी। कार पहिले नै उच्च (वा कम) प्रसारण मा जान्छ।
कार मा Ulyanovsk को हाइड्रोलिक क्लच निर्माण। यो एकाइ, धेरै तत्व जोडती अर्थात
क्लच मास्टर सिलिन्डर UAZ।
तरल पदार्थ परिसंचरण हाइड्रोलिक ट्यूब।
विस्तार ट्यांक फिलर।
क्लच दास सिलेंडर।
फिर्ती वसन्त र पेडल।
नवीनतम को सहायता र सारा जटिल संग नोड व्यवस्थित गरिएको छ।
ड्राइभर प्रेस जब पेडल शक्ति को क्लच मास्टर सिलेंडर गर्न रड मार्फत प्रसारित छ जो प्रणाली, सिर्जना छ। UAZ 469 जबकि अझै पनि "स्थानान्तरण मा।" सवारी यसबाहेक, छोटो अवधि लागि सिलेंडर प्रयास लिन्छ र काम गर्न तिनीहरूलाई पहुंचाता। यस मामला मा तरल पदार्थ धातु ट्यूब र रबर Hoses मार्फत बित्दै। यो काम सिलेंडर एक काँटा संग जोडिएको छ। पिस्टन सदस्य उकालो उत्प्रेरित गर्छ गर्दा बिभाजनमा actuated छ र उत्प्रेरित गर्छ जारी असर। यसरी, प्रणाली प्रसारण देखि इन्जिन असक्षम गर्छ। यो लामो ड्राइभर फिर्ता पेडल विज्ञप्ति रूपमा जारी हुनेछ। लामो समय को लागि यो धेरै पहना जारी असर राख्न हुँदैन। समय, यो बज गर्न सुरु हुन्छ। तसर्थ, अनुभवी चालक कार 10-15 सेकेन्ड भन्दा बढी लायक छ भने, पेडल जारी गर्न सल्लाह छन्। निस्सन्देह, यो "neytralke" मा छ भने।
एकाइ क्लच मास्टर सिलेंडर oise के हो? यो तत्व एक धातु शरीर, फिर्ती वसन्त, पिस्टन र pusher हुन्छन्। उत्तरार्द्ध एक क्लच पेडल संग जोडिएको छ।
यो तत्व दबाब रूपान्तरण गरेर सञ्चालन सिलेंडर गर्न पेडल देखि सेना प्रसारित गर्न गर्दछ को हाइड्रोलिक तरल पदार्थ को। हामी थप विस्तार संरचना विचार भने, सक्रिय तत्व भित्र दुई भागमा विभाजन गरिएको छ। बाहिरी हाइड्रोलिक तरल भण्डारण र वितरण actuator लागि गर्दछ। यसको मात्रा को उचित समायोजन संग कुल काम मात्रा 75 प्रतिशत हुनुपर्छ। को क्लच मास्टर सिलेंडर तल्लो भाग लागि, यो काम गरिरहेको क्षेत्र रूपमा सेवा गर्दैछन्। को पेडल उदास छ जब, पिस्टन सदस्य Dividing पर्खाल एउटा वसन्त द्वारा biased छ। को pusher सदस्य र एक खाली गठन गरिएको छ बीच जो, हाइड्रोलिक तरल जब पेडल उजागर भरिएको छ। जब यो माथिल्लो भाग बाट यो खुवाउन बर्खास्त गरिएको छ। को क्लच जारी बिभाजनमा मा - पिस्टन दास सिलेंडर गर्न चालक को खुट्टा देखि शक्ति पहुंचाता, र त्यसपछि। प्रणाली मा दबाव को स्तर एकदम बढ्छ। तसर्थ, क्लच पिस्टन को diameters र यसको आउटलेट खुलने वृद्धि मा फरक द्वारा संचालित छ। यांत्रिक विपरीत, ड्राइभ यस प्रकारको प्रयोग गर्न सजिलो छ, पेडल देखि actuation बिभाजनमा लागि न्यूनतम शक्ति दिनु पर्छ। ड्राइभर विज्ञप्ति जब खुट्टा यसको प्रारम्भिक स्थितिमा एक pusher तत्व संग पिस्टन उत्प्रेरित गर्छ जो फिर्ती वसन्त, सक्रिय गरियो। दुई Chambers बीच तरल पदार्थ को परिसंचरण फेरि फेरि सुरु भयो।
जस्तै क्लच मास्टर सिलेंडर (UAZ सहित) र यसको घटक रूपमा एक तत्व को डिजाइन, यो धेरै विश्वसनीय छ। तर यो पनि गम्भीर समस्या को स्रोत हुन सक्छ। एक विफलता को सबै भन्दा बारम्बार कारण को - को विस्तार ट्यांक मा हाइड्रोलिक तरल पदार्थ को एक कम स्तर। यसलाई अन्यथा रहन एक जोखिम छ, हरेक सेवा मा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ "एक क्लच बिना।" कम पिस्टन मा सामान्य धक्का को क्लच जारी बिभाजनमा उत्पादन र सञ्चालन गर्न सक्षम छ। कार नै गियर मा जानेछन्। जो स्तर को कमी हुन सक्छ? यो depressurization प्रणाली। को काम गर्न मास्टर सिलेंडर चलाउन सबै पाइप र Hoses जाँच गर्नुहोस्। पछिल्लो पनि लिक लागि जाँच गर्नुपर्छ। मुनि तल खण्डन गर्ने हुन्छ। उहाँले बस रड को बारम्बार आन्दोलन बाट frays। यो गाढा तेल पैताला छाप् हुन सक्छ थाह छ। एउटै चिह्न बाटो राजमार्गहरू आफूलाई मा फेला (यो पाङ्ग्रा कट्टर मार्फत चल्छ विशेष गरी भने)। तपाईं अक्सर UAZ लागि साँचो छ गैर-मानक पाङ्ग्राहरू, छ भने, तिनीहरूले नली खोल्दै गर्दा RUB सक्छ। र यो मात्र होइन कर्षण, तर पनि ब्रेक पाइप सम्बन्धित छ। तिनीहरूले रबर मोड जहाँ ठाउँमा। हामी तिनीहरूलाई unsealed दिंदैनौं। चर्किएको को उपस्थिति मा तुरून्त नविकरण हुनुपर्छ।
UAZ सिलेंडर क्लच मास्टर काम गरिरहेको छैन "र अर्को कारण प्रणाली मा हावा को उपस्थिति छ। साना बुलबुले क्लच विफलता गर्न सक्छ। यो दोष राम्ररी अघिल्लो एक जोडिएको छ। एयर क्षतिग्रस्त पाइप र Hoses को "चूसना" गर्न सक्नुहुन्छ।
UAZ क्लच मास्टर सिलेंडर प्रतिस्थापन
कार पेडल थिचेर प्रतिक्रिया भने छैन, र तरल पदार्थ स्तर सामान्य छ र त्यहाँ पाइप कुनै क्षति, फलामको डण्डाले वा पिस्टन संग सम्भवत समस्या छ। फलस्वरूप, यो प्रणालीको लागि इच्छित दबाव विकास गर्न सक्दैन। को क्लच मास्टर सिलेंडर प्रतिस्थापन गर्न, UAZ तपाईं समतल सतह मा राख्न र सिरिंज संग तरल बाहिर पंप आवश्यक छ। अर्को, यो पेडल देखि मास्टर सिलेंडर विच्छेद र सबै प्वालहरू जो देखि तरल प्रवाह सील। यो पनि पाइप लागू हुन्छ। निश्चित कुनै माटो र चिस्यान को भित्र बनाउन। यो तरल धेरै hygroscopic छ। त्यसपछि सिलेंडर पागल वोल्ट नट आदि खोल्नु र यसलाई पुल। नयाँ तत्व स्थापना पछि तरल थप्न र प्रणाली मार्फत पंप।
यो हामी एक नली र प्लास्टिक बोतल, को तरल पदार्थ zavozdushennaya सकिन हुनेछ जुन आवश्यक छ। को काम सिलेंडर मा वाल्व मार्फत पम्प्ड गरिनेछ। उहाँले एक नली धारण आफ्नो टोपी हटाउने 10 द्वारा प्रमुख, unscrewed र दोस्रो सहायक कल। उहाँले क्लच पेडल थिच्नुहोस् हुनेछ। यस समयमा, तपाईं बहने तरल पदार्थ पालना गर्न आवश्यक छ। तपाईं अर्थात्, यो चिल्लो नभएसम्म प्रेस पर्छ, बुलबुले को नि: शुल्क। कि पछि, एक पटक फेरि क्लच तरल पदार्थ जलाशय को स्तर जाँच गर्नुहोस्। पतन भने, अधिकतम चिन्ह सम्म Refill। यसलाई विभिन्न निर्माताहरु देखि तरल पदार्थ मिश्रण गर्न महत्त्वपूर्ण छ। तपाईं जो ब्रान्ड अघि भर गरिएको छ थाहा छैन, पूर्ण प्रतिस्थापन बनाउन। यो सही हुनेछ। अधिक त्यसैले किनभने क्लच र ब्रेक सिस्टम मा तरल पदार्थ को जीवन छैन थप दुई वर्ष छ। त्यसपछि यो चिस्यान को अवशोषित र अप्रभावी बन्नेछ।
त्यसैले, हामी बाहिर के मास्टर सिलेंडर फेला सवारीसाधान क्लच, यो कसरी काम गर्छ र कसरी आफ्नै हातले यो प्रतिस्थापन गर्न।
एसयूवी "किया": दायरा। फ्रेम एसयूवी "किया" (फोटो)
MTZ 1523: प्राविधिक विनिर्देशों र मालिकको समीक्षा
"UAZ" र यसको स्थापना मा कमला
"क्षेत्र" वा UAZ - राम्रो छ? विनिर्देशों, मूल्यहरू, फोटो
नोभेम्बर मा गोवा मा मौसम के छ? म गिरावट मा एक छुट्टी लागि जानु पर्छ
समायोजक प्राविधिक उपकरण: निर्देश, जिम्मेवारी, शिक्षा
चोट सबैभन्दा बारम्बार मामला - छुरी हान्नु घाउ
फुटबल खेलाडी यूजीन Lovchev
तपाईंको हातले फोटोबक्स: जीवनको अविस्मरणीय क्षणको सुन्दर डिजाइन
बयलर "Konord": मालिकको समीक्षा